January 24, 2021 2318
मासिक रुप’मा थोरै मात्र तलब पाउने कर्मचा’रीले एकैचोटी ठूलो रकम बोनस पायो भने कुन चाही कर्मचारी दंग नहोला ? केहि समय अगाडि चीनको एउटा कम्प’नीले आफ्ना कर्मचारी’लाई झण्डै पौने ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम बोनस बाँड्यो ।
नगद उपलब्ध गरा’एको उक्त बो’नस रकम गोजीमा अटाउने कुरै भएन । त्यसपछि कर्मचा’रीहरुले आफ्नो भागमा परेको बोन’स रकम बोरामा भरेर घरतिर लागे । का’र्यरत कर्मचारीले त बोनस रकम पाए पाए, सेवा निवृत्त कर्मचारीले समेत केही बोनस र’कम पाएका थिए ।
फंगदा स्पेसनल स्टिल टेक्नो’लोजी नामक कम्पनीले यस’री बोनस बाँडेको थियो । यो कम्पनीमा ५ हजार मानिसले काम गर्दछन् ।तीन करोड बो’नस रकम कर्मचारी’हरुलाई बाँड्दा एउटाको भा’गमा लाखौँ रकम परेको थियो । बोनस बाँडिएको उक्त र’कम सबै अफिसबाटै नगद बोनस बाँडिएको हो ।
यस कम्पनीले ७ वर्ष यता आफ्ना कर्म’चारीलाई २६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम बोनसमा बाँडिस’केको समाचारमा जना’ईएको छ । कम्पनीको वार्षिक आय करोडौँ डलर रहेको पनि उल्लेख छ ।
Prevमोबाइल हराउँदा एक मिनेटमै कसरी पत्ता लगाउने ! थाहा पाईराख्नुहोस्
Nextके तपाईंलाई पायल्स छ ? निको पार्न अपनाउनुस् यस्तो घरेलु विधि
जर्नेल बानियाँले आफ्नो नाबालक छोरालाई ‘बर्दी’ भिराएर टिक-टक बनाउन लगाएपछि…..
बाबुको मृ`त्युपछी जब अन्तिम संस्कार गर्न लाग्दा जग्गा र सम्पत्तीको नाममा दाजुभाईबीच लडाई भएपछी (भिडियो सहित)